‘फेसएप’ मा सुरक्षा चुनौती, प्रयोग नगर्न विशेषज्ञहरुको सुझाव- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
‘फेसएप’ मा सुरक्षा चुनौती, प्रयोग नगर्न विशेषज्ञहरुको सुझाव
श्रावण १, २०७६ एजेन्सीहरु
काठमाडौँ — बुढ्यौलीमा तपाई कस्तो देखिनु हुनेछ भन्ने तस्बिर देखाउने ‘फेस एप’ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । विभिन्न मुलुकका धेरै प्रयोगकर्ताले यसको उपयोग गरिसकेका छन् । यो एप प्रयोग गरिसकेकाहरुको डेटा असुरक्षित भइसकेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । अब प्रयोग नगर्न उनीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
‘फेस एप ओल्ड फिल्टर’ एउटा यस्तो एप हो जुन उपयोगकर्ताको अनुहार परिवर्तन गरी बढी उमेर भएपछि कस्तो देखिने भन्ने तस्बिर सार्वजनिक गर्छ। ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो एपको एउटा क्रेज नै चलेको छ। यसको उपयोग गरी आफ्ना तस्बिर पोस्ट गर्नेहरु बढ्दै गएका छन्। यदि तपाईको ‘इन्स्टाग्राम स्टोरीज’ वा ‘ट्वीटर फीड’मा ती व्यक्तिहरुले भरिएका छन् जसले आफ्नो वर्तमान उमेर भन्दाबढी बढी र स्मार्ट देखाउन चाहेका छन्, तिनीलाई आफ्नो अनुहार देखाउन तपाईले ‘फेसएप’लाई धन्यवाद दिन सक्नु हुनेछ। यसका साथै सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न भने तपाई तयार हुनैपर्छ।
सन् २०१७ मा पहिलो पटक रुसीहरुले ‘फेस एप’ सार्वजनिक गरेका थिए। त्यही एप ‘आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स(एआई)’ का साथ अहिले फेरी भाइरल भएको हो। विश्वका केही चर्चित स्टारसहितका कयौ प्रयोगकर्ताले ‘ओल्ड फिल्टर’ मार्फत यसको प्रयोग नै गरेका थिए। प्रविधि सम्बन्धि जानकारी लिने अनलाईन ‘टेकक्रन्च’ का अनुसार तपाईको तस्बिरमा फिल्टर जोड्न एपले ‘एआई’ को प्रयोग गर्छ। एपमा रहेका विभिन्न फिल्टरका लागि सेल्फी सम्पादन एउटा न्युट्रल नेटवर्कमा निर्भर रहेको हुन्छ। यसअघि ‘टेकक्रन्च’ को रिपोर्ट अनुसार पुरानो फिल्टर अब भाईरल बनेको छ। उसले लेखेको छ , ‘एपमा अन्य फिचर्स पनि छन, जस्तो की मुस्काउनु, अन्य फिल्टरका साथ युवा वा धेरै राम्रो देखाउनु। यो एप आईओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छन्।
प्रविधि विशेषज्ञहरुले यो ‘फेसएप’ असुरक्षित रहेको बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार यो एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ‘नो’ अर्थात् अस्वीकृत गरेपछि पनि तपाईँको डेटासम्म पहुँच कायम राख्ने क्षमता राख्छ। एपलाई प्रयोग गर्ने स्वीकृतिपछि तपाईलाई ‘स्मार्ट’ बुढेसकालको तस्बिर देखाउन फिल्टर गर्छ। यसका लागि एपले तपाईका फोटो ग्यालरी मध्ये एउटा तस्बिरलाई सम्पादन गर्छ। यो गर्नका लागि यसमा एआईको उपयोग गरिन्छ। विशेषज्ञ भन्छन्, ‘यसले तपाईको क्यामेरा रोलका सबै तस्बिरहरुमा एक्सेस प्राप्त गर्नुका साथै स्टोर गर्न सक्छ। कसैले तपाईँको कुनैपनि तस्बिरलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर वा संशोसित गरेर गलत प्रयोग गर्न सक्छन्।’
‘फेस एप’मा सुरक्षा चुनौतिहरु यथेस्ट रहेको ‘डेलीमेल’ ले विशेषज्ञहरुलाई उदृत गरी लेखेको छ। यो एप ‘एआई’ प्रविधिबाट चल्ने भएकाले तपाईँको फोन ग्यालरीमा भएको एउटा तस्बिरलाई दोब्बर वा तेब्बर उमेरको छविमा रुपान्तरण गर्छ। यसले तपाईको कपालको रंग, तपाईलाई दाह्रीवाल र युवा समेत देखाउन सक्छ। यो एप सुचारु भएपछि तपाईका संग्रहित सामग्री र तस्बिरहरु बिना अनुमतिकै स्टोर गर्न सक्ने क्षमता पनि यसमा छ। यसको अर्थ तपाईको डेटा असुरक्षित हुनेभयो। यति मात्रै हैन तपाईको स्वीकृति बिनैपनि डेटाहरु अरुलाई बेच्न सक्छ। यस्तोमा अवस्था पीडित भए सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुहुनेछ।
के हो फेसएप?
फेसएप एउटा फोटो-मर्फिङ एप हो, जुन अनुहारमा परिवर्तन गर्नका लागि आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स(एआई) र तपाईका वास्तविक तस्वीरलाई परिवर्तन गर्न उपयोग गरिन्छ। यो एपले तपाईको फोटो ग्यालरीमा रहेका तस्बिरहरु उपयोग गर्न सक्छ वा तपाई एपभित्रै पनि एउटा तस्बिर खिच्न सक्नु हुनेछ। निःशुल्क सेवाले एआईको प्रयोगबाट तपाईको फोन ग्यालरीमा रहेको तस्बिर सम्पादन गरी दोब्बर वा तेब्बर उमेरको स्मार्ट व्यक्तिका रुपमा तपाईलाई प्रस्तुत गर्ने क्षमता राख्छ। यसले तपाईँको कपालको रंग पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईँलाई यो हेर्नका लागि पनि अनुमति दिन्छ कि तपाई दाह्रीका साथ कस्तो देखिनु हुन्छ?
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ २०:२७
अनुगमन नहुँदा जथाभावी सामान बिक्री
स्थानीय तहको ध्यान गएन
श्रावण १, २०७६ रमेशचन्द्र अधिकारी
धनकुटा — जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा चासो नदिँदा अवैध रूपमा औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ निर्वाध बिक्री, वितरण भइरहेको पाइएको छ । बजार अनुगमन निर्देशिकामार्फत नियमित अनुगमन गरिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
अधिकांब स्थानीय तहले बजार अनुगमन निर्देशिकासमेत बनाएका छैनन् । स्थानीय तहले वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न अनुगमन टोली गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी छैन ।
हालसम्म धनकुटा नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमार्फत गत चैतमा बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन भने भएको छैन । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसमेत गठन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । समिति बने पनि हालसम्म अनुगमन भएको छैन ।
अनुगमन नियमित गर्न नसकिएको उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले बताइन् । अनुगमन कार्य नै पारदर्शी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निर्वाचित भएपछि जम्मा दुईपटक बजार अनुगमन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘बजार अनुगमन हुन दसैं नै पर्खिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न कठिनाइले नियमित गर्न सकिएको छैन ।’
बजारमा दर्ता नगरिएका पसल भेटिने गरेकाले चेतावनी दिएको उनले बताइन् । धनकुटा, हिले, मूलघाटलगायत बजार स्थानीय तहबाहेकका अन्य निकायले सीमित रूपमा मात्र अनुगमन गर्दै आएका छन् । यस्तै कतिपय पालिकाले हालसम्म बजार अनुगमनका लागि निर्देशिकासमेत बनाएका छैनन् । छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा हालसम्म कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । त्यहाँ अनुगमन कार्य प्रभावकारी छैन । बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा बनाउने तयारी गरिएको पालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले बताए । साँगुरी गाउँपालिकाले पनि बजार अनुगमन कार्य गर्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि कार्यविधि हालसम्म बन्न नसकेको अध्यक्ष कुमारजंग याक्खाले बताए ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका तर्फबाट हालसम्म अनुगमन भएको छैन । जितपुर बजारमा बिनादर्ताका अवैध रूपमा कतिपय औषधि पसल, होटल तथा पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । सडक तथा अन्य विकास निर्माणमा अनुगमन गरिए पनि बजार अनुगमन गर्न ध्यान नगएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहदेव रायामाझीले बताए । उनले कसले अनुगमन गर्छ भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए । नगरप्रमुख पर्शुराम नेपालले बजार अनुगमन कार्यलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।
सहिदभूमि गाउँपालिकामा पनि बजार अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ । अधिकांश पसलमा मिति नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ भेटिने गरे पनि सम्बन्धित निकायको चासो गएको छैन । पूर्वाधार निर्माणको बाहेक बजार पसल अनुगमन हालसम्म नभएको उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राईको भनाइ छ । त्यहाँ कार्यविधिसमेत बनेको छैन ।
चौबिसे गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधि आएपछि चारपटक बजार अनुगमन गरिएको अध्यक्ष खजिन्द्र राईले बताए । मुख्य बजार राजारानीमा मिति नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री गरिएको पाइएकाले नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यहाँ पनि नियमित बजार अनुगमन भने गर्न नसकिएको उनले बताए ।
दुई औषधि पसल सिल
स्थानीय तहबाहेकका अन्य निकाय भने बजार अनुगमनमा केही सक्रिय देखिन्छन् । यसक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र प्रशासनको संयुक्त अनुगमनले पाख्रीबास बजारमा अवैध रूपमा सञ्चालित औषधि पसलमा ताला लगाएको छ । फरक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अन्य व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पाइएकाले सिल गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुधीर साफीले बताए ।
पाख्रीबास र महालक्ष्मी नगरपालिकाको जितपुर बजारमा गरिएको अनुगमनमा अधिकांब पसलमा मिति नाघेका वस्तु फेला परेको छ भने कर छल्ने उद्देश्यले बिनादर्ताका पसल तथा होटल सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, घरेलु तथा साधन उद्योग समिति, कर कार्यालय, प्रशासन, वाणिज्य संघलगायतको सर्वपक्षीय अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला परेको जनाइएको छ ।
यस्तै अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरिएको तथा खाद्य निर्देशिका विपरीत उत्पादित निर्वाध रूपमा बिक्री वितरण गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजनका निमिक्त प्रमुख शिवशंकर मिश्रले बताए । अधिकांश पसल घरेलु तथा वाणिज्य संघमा दर्ता नगरिएकाले त्यस्ता पसललाई तत्काल दर्ता गर्न चेतावनी दिइएको घरेलु समितिका प्रमुख दीपक पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ २०:१३
मंगलबार राति खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण
गुगलको सेवा नचले स्मार्टफोनको पैसा फिर्ता